သိန္း 600 ႏွင့္ေအာက္ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
ဈေးနှုန်း သိန္း 600 ႏွင့္ေအာက္
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10182334 အတွက် မြင့်မြတ်ဆုအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာ မာဃာ5လမ်း တတိယထပ် တိုက်ခနိးလေး အမြန်ရောင်းရန်ရှိသည် 09-262653500
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10181686 အတွက် Zaluck War Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10172235 အတွက် Perfect World Real Estate Services (Company) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာ၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မရာဇာ ၁ လမ်း တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10170514 အတွက် Perfect World Real Estate Services (Company) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ (7)ရပ်ကွက်တွင် အခန်းကျယ် decoration အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
560 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10164909 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10164236 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10160022 အတွက် စည်တော်ကြီး အိမ် ခြံ မြေ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10158170 အတွက် မြင့်မြတ်ဆုအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်